Tag: ngwa mgbakwunye | Martech Zone
Anyị ewughachila usoro nke saịtị maka ọtụtụ ndị ahịa anyị na WordPress, otu n'ime ihe anyị na-anwa ime bụ ịhazi ozi ahụ nke ọma. Iji mee nke a, anyị na-achọkarị ịmepụta ibe nnabata ma tinye menu nke na-edepụta peeji niile dị n'okpuru ya na-akpaghị aka. Ndepụta nke ibe akwukwo, ma obu akwukwo. Na nwute, enweghị ọrụ ma ọ bụ atụmatụ ebumpụta ụwa iji mee nke a n'ime WordPress, yabụ anyị mepụtara Ndepụta WordPress
DK New Media nwere nke a WordPress ngwa mgbakwunye na azụ-burner ruo oge ụfọdụ. Ọchịchọ maka ngwa mgbakwunye ihe oyiyi dị mfe, nke na-agbanwe dị elu abụghị naanị maka ndị ahịa anyị, kamakwa obodo WordPress. Ihe mgbakwunye ndị ahụ achọtara m nke kwere nkwa ime ihe anyị chọrọ bụ ndị agbajiri ma ọ bụ na ha anaghị arụ ọrụ ọ bụla. Ya mere, anyị mere nke anyị. Versiondị nke mbụ ahụ jọrọ njọ, yabụ etinyeghị ya na WordPress Plugin Repository.
Oge 48 gara aga abụghị ihe ọchị. Teknụzụ bụ ihe dị egwu, mana ọ zughi oke. Mgbe ọ bụrụ na ada ada, echeghị m na e nwere n'ezie na ọtụtụ nkwadebe i nwere ike… ma ị ga-eme. Nwere ike chọpụtala na saịtị anyị na-eji nwayọ nwayọ ewe izu ole na ole gara aga. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya nyere eziokwu ahụ na anyị nwere ya na ngwugwu ngwugwu jikọtara yana sava data na ntanetị nnyefe ọdịnaya.